Inona avy no fantatrao momba ny milina fanapoahana fitifirana - News - Qingdao Puhua Heavy Industrial Machinary Co., Ltd.
[email protected]china.com +86-532-88191002
Inona no fantatrao momba ny milina famaohana tifitra hook
Ao amin'ny indostria fananganana vy, saika ny fitifirana vy rehetra sy ny fanariana vy dia tsy maintsy entina amin'ny milina famaohana. Ny tanjon'ny fanaovana izany dia tsy ny fanadiovana ny loto amin'ny laoniny fotsiny, fa ny hilalao ny anjara asan'ny fanaraha-maso kalitao aorian'ny famitana ny famokarana, ary ny fisivana ireo vokatra amin'ny faritra mahantra.
Amin'ny famokarana casting mahazatra, ny casting rehetra vokarina dia tsy maintsy diovina amin'ny milina fipoahana. Amin'izany fomba izany dia azo diovina ny loto ao ambonin'ny casting. Mandritra izany fotoana izany, na misy lesoka amin'ny tampon-tsiranoka, na misy fantsom-panafody sy fasika sy fitrandrahana peeling, izay azo jerena tsara amin'ny alàlan'ny fitsaboana ara-teknika ny karazana fantsom-panafihana karazana hook hook , mety ho mora amin'ireo vokatra tsy nety ireo no nopahana mivantana, ary tsy mila mifidy tsirairay intsony.
Ankoatry ny fanadiovana ny sehatry ny fanariana, ny masinina manapoaka fantsom-panafihana milina dia afaka manodina ny sehatry ny fanariana ihany koa. Amin'ny alàlan'ny fitsaboana ara-teknikan'ny masinina fanapoahana tifitra hook, ny haavon'ny fanariana dia mety hahatratra ny vokatra tsara tadiavina, ary hamokatra ny vokatra azo avy amin'ny kalitao amboniny. Izy io dia afaka mamaly mora foana ny fangatahana famokarana casting, ary mampihena be ny vidin'ny asa-tànana amin'ny vidin'ny casting, manatsara ny fahombiazan'ny famokarana casting. Amin'ny alàlan'ny fitsaboana amin'ny alàlan'ny milina fanapoahana karazana hook dia mety mahafeno ny fepetra takiana ny tontolon'ny casting.
Teo aloha:Inona no tokony hojerentsika rehefa mividy milina fanapoahana tifitra
Manaraka:Milina fanariana fantsom-basy manokana